I-iPhone 13: ukwethulwa, intengo nakho konke ukucaciswa kwayo | Izindaba ze-IPhone
ULuis Padilla | 26/07/2021 08:55 | iPhone 13
Sisesimweni sokugcina ngaphambi kokwethulwa nokwethulwa kwe-iPhone 13 elandelayo, futhi sifuna ukukufingqa konke esikwaziyo kuze kube manje nge-smartphone elandelayo ye-Apple ku-athikili eyodwa esizoyibuyekeza ngolwazi oluvela emasontweni azayo.
1 Idethi yokukhishwa kwe-IPhone 13
2 Izinhlobo ze-IPhone 13 ne-13 Pro Max
3 Idizayini ye-iPhone 13 entsha
4 Imibala ye-iPhone 13 entsha
5 Izici ezithathwa njengeziqinisekisiwe
5.2 I-Face ID
5.4 Ibhethri nokushaja
5.5 Amanye ama-specs
6 Izobiza malini i-iPhone 13?
Idethi yokukhishwa kwe-IPhone 13
Ngemuva kokubambezeleka kokwethulwa kwe-iPhone ngonyaka odlule, ngenxa yobhadane lwe-COVID-19, kulo nyaka kubonakala ukuthi ukwethulwa kwayo nokwethulwa kwayo okulandelayo kuzokwenzeka phambilini. Kuyiqiniso ukuthi kulo nyaka isimo salo bhubhane sishintshile kodwa kunezinkinga eziningi ngokunikezwa kwama-microchips, kodwa-ke kukhona amahlebezi aqinisekisa ukuthi I-TSMC ibeka phambili ukukhiqizwa kwezinto ku-AppleFuthi uma singeza kulokhu ukuthi ukuvinjelwa kweHuawei kunciphisa ukuthengisa kwayo kakhulu, kungenzeka ukuthi i-iPhone ayihlushwa ukushoda kwezakhi.
Ngakho konke lokhu, usuku lokukhishwa kwe-iPhone 13 kuwo wonke amamodeli ayo ingaqhubekela phambili ngenyanga kaSepthemba. Amahemuhemu akhomba Septhemba 17 noma 24 njengezinsuku ezingaba khona kakhulu qalisa. Uma usuku lokuqala luqinisekiswa, ukwethulwa kwalo kuzokwenzeka ngoLwesibili, Septhemba 7 (Sesivele siyazi ukuthi i-Apple ithanda kanjani uLwesibili ngemicimbi yayo) ngokuqala kokubhuka ngoLwesihlanu olulandelayo, ngo-Septhemba 10, nokuthengiswa okuqondile ezitolo zomzimba naku-inthanethi ngoSepthemba 17. Lezi zinsuku, njengoba sisho, zingabambezeleka ngesonto ukube ukuthengisa ngqo bekungezezikhathi zangoSepthemba 24.
Izinhlobo ze-IPhone 13 ne-13 Pro Max
Njalo ngonyaka kunempikiswano efanayo ngegama le-iPhone entsha. Yiyona kuphela idivaysi ye-Apple ethola inombolo egameni layo, ekhombisa ngokusobala imodeli esikhuluma ngayo. I-iPad Pro, i-iPad Air, i-iPad, iMacBook, iMac ... I-Apple ayilandeli le nqubo efanayo lapho iqamba yonke ikhathalogi yomkhiqizo wayo, ngakho-ke iminyaka embalwa kuzwakale ukuthi i-iPhone ingashiya inombolo bese ibizwa nge-iPhone kuphela. Kepha kubonakala sengathi kulo nyaka kuzobe kungenjalo, futhi kuzoqhubeka nenombolo engxenyeni yokugcina yegama layo.
Umbuzo osalayo uthi Ingabe izobizwa nge-iPhone 12s noma i-iPhone 13? I-iPhone 11 ilandelwe yi-iPhone 12, hhayi eye-11s, mhlawumbe ngoba ibingakhumbuli izehlakalo zangalolo suku olubi e-United States, noma ngoba nje le modeli entsha ilethe ushintsho lomklamo olwehlukanisa ngokwanele kolo olwandulela ngaphambili. Le iPhone 13 entsha kulindeleke ukuthi ingalethi ushintsho olukhulu lomklamo uma kuqhathaniswa ne-iPhone 12, kodwa amahlebezi akhombisa ukuthi ngeke ibizwe nge-iPhone 12s kepha i-iPhone 13.
Yiziphi izinhlobo ezizotholakala ngale iPhone entsha? Abahlaziyi abaningi bayavuma lokho ngeke lube khona ushintsho uma kuqhathaniswa nesizukulwane samanje nokuthi i-iPhone 12 ngayinye izoba nomlandeli wayo kulo nyaka:
I-iPhone 13 mini: enesikrini esingu-5,4-intshi, ozolandela i-iPhone 12 mini.
I-iPhone 13: enesikrini esingu-6,1-inch, ozothatha indawo ye-iPhone 12.
I-iPhone 13 Pro: enesikrini esingu-6,1-inch, ozothatha isikhundla se-iPhone 12 Pro.
I-iPhone 13 Pro Max: enesikrini esingu-6,7-intshi, ozongena esikhundleni se-iPhone 12 Pro Max.
Kubukeka sengathi ukuthengiswa okungekuhle kwe-iPhone 12 mini ngeke kuthinte ukuqhubeka kwayo ngaphakathi kwebanga le-iPhone kulo nyaka uma sinaka amahemuhemu akamuva, yize kusekhona labo abaqinisekisa ukuthi ngeke ivuselelwe kulo nyaka. Ngaphandle kokungabaza imodeli ebanjwa kakhulu ngezikhonkwane zalo lonke uhla. Mayelana ne-iPhone SE, ngeke kube khona ukuvuselelwa le 2021, futhi kuzofanele silinde kuze kube ngu-2022 ukubona imodeli entsha esinikezwa yi-Apple.
Idizayini ye-iPhone 13 entsha
I-Apple izongeza izinguquko ezimbalwa ekwakhiweni jikelele kwama-iPhones amasha. Bazoqhubeka nokuhlehla kwengilazi, okuthile okubalulekile ekushajeni okungenantambo ukuze kusebenze, namaphethelo ayizicaba, njenge-iPhone 12. Ngaphambili sizoqhubeka nesikrini singene ngaphambili konke, futhi i- "notch" ebonakalise i-iPhone kusukela i-iPhone X izobe ikhona, noma kunjalo ngokwehliswa kosayizi sibonga ukubekwa kwesipikha okusha. Kulezi zinhlobo ezintsha isipikha ngeke singene maphakathi notch Esikhundleni salokho, izotholakala onqenqemeni olungenhla lwesikrini, ishiye isikhala esiningi sekhamera yangaphambili nazo zonke izingxenye zeFaceID ezizobekwa, ngakho-ke ububanzi bayo bungancishiswa.
Ubukhulu be-iPhone entsha buzofana njengamamodeli wayo wamanje, ubukhulu kuphela obuzokhushulwa kancane, cishe u-0,26 mm, okuthile esingeke sikuqaphele lapho sinakho ezandleni zethu, kepha lokho kungasinika inkinga ethile ngamakhava amamodeli wamanje. Kunoma ikuphi, amacala we-iPhone 12 ngeke asebenzele i-iPhone 13 entsha, ngoba imodyuli yekhamera izoba nkulu.
Kukule ngxenye ye-iPhone lapho uzokwazi khona ukubona izinguquko ezimbalwa zokwakheka kulo nyaka, ngoba izinhloso zizobe zikhudlwana futhi zizogqama kakhulu ukwedlula isizukulwane samanje, ngakho-ke imodyuli, njengoba sishilo ngaphambili, ube mkhulu. Amanye amahemuhemu akhuluma ngokuhleleka okusha kwama-lens we-iPhone 12 no-12 mini, ezoqhubeka nokuba nezimbili kuphela. Kubuye kwaxoxwa nethuba lokuthi izinhloso ze-2/3 (kuya ngemodeli) zivikelwe yikristalu elilodwa lesafire, esikhundleni sokwenza lokho ngakunye njengamamodeli wamanje.
Asifuni ukwehluleka ukusho okungenzeka mayelana nesixhumi sombani se-iPhone 13 entsha, ngoba yize kubonakala kungenakwenzeka, kube namahlebezi ambalwa wokuthi kungenzeka ukuthi imodeli eyodwa ayinalo noma yiluphi uhlobo lwesixhumi. Uhlelo lweMagSafe olukhishwe ngonyaka owedlule lwalungeke lusetshenziselwe ukukhokhisa kuphela le divayisi kepha futhi nokuhambisa idatha. Njengoba sisho, kubonakala kuyinto engase ifike maduze kodwa engeke yenzeke kulo nyaka.
Imibala ye-iPhone 13 entsha
Imibala ye-iPhone entsha ihlala ikhiqiza amahemuhemu amaningi ayizungezile, yize ngokuhamba kwesikhathi ingaqinisekisiwe ezimweni eziningi. Impela amahemuhemu anesisekelo sawo, U-Apple wenze ukuhlolwa okuningi ngemibala ehlukene ngaso sonke isikhathi sokuthuthukiswa kwama-iPhones amasha, kushiya umbala omusha noma emibili ekugcineni, okungcono kakhulu. Njengamanje i-iPhone 12 itholakala ngombala omhlophe, omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okotshani, onsomi nokubomvu, kanti i-iPhone 12 Pro ikwi-graphite, isiliva, igolide nokuhlaza okwesibhakabhaka.
Ngamamodeli amasha we-iPhone sizoqhubeka nokuba neningi lolo hlobo lwemibala, yize eminye izoshintshwa. Ngakho-ke ku-iPhone 13 Pro graphite izongena esikhundleni se-matte black, ukuthi kungabonakala kumnyama kakhulu kunemodeli yamanje, okumpunga ngaphezulu. Kukhona nokukhulunywa ngombala wethusi, owolintshi ongaphezulu kunegolide lamanje. Futhi esimweni samamodeli we "non-Pro", umbala obomvana ungafakwa, kepha kubonakala kuyingozi kakhulu.
Izici ezithathwa njengeziqinisekisiwe
Izikrini zizogcina ukulungiswa okufanayo nokwamanje, kanye nosayizi ofanayo. Okulindelekile yilokho, kulo nyaka yebo, kufika inani lokuvuselela i-120Hz, yize kunqunyelwe kumamodeli we-Pro, womabili amayintshi angu-6.1 no-6.7. Izikrini zizoba ngohlobo lwe-LTPO, oluzonciphisa ukusetshenziswa kwamandla ngo-15 kuye ku-20%. Lolu hlobo lobuchwepheshe lwenza futhi ukuthi kunciphise inani lezinto ezingaphansi kwesikrini, ukuze kutholakale isikhala esengeziwe sezinye izinto (ibhethri, isibonelo).
Ezinsukwini zakamuva kuphinde kukhulunywe ngakho ukusebenza kwesikrini esisha, "Ihlala iboniswa" noma isikrini sihlala sivuliwe, njengakwi-Apple Watch yochungechunge 5. Ukwehliswa kwamandla okusetshenziswa kwezikrini ze-LTPO kunganxephezela ukusetshenziswa okuphezulu okungaba nalesi sici, okuzokuvumela ukuthi uhlale ubona imininingwane yesikrini ne-iPhone ikhiyiwe.
I-iPhone 13 izogcina ukubonwa kobuso njengohlelo lokuphepha lokuthenga, ukukhokha nge-Apple Pay nokuvula ifoni. Ezinsukwini ezedlule, kuvele amahlebezi athi lokho I-iPhone 13 ingaqala uhlelo olusha lokubona ubuso ukuthi izosebenza ngisho nesifihla-buso, okungaba isisusa esibalulekile sokuvuselela i-iPhone kulo nyaka.
Kucishe kukhishwe ukuthi i-iPhone entsha inohlelo lokuqaphela iminwe, noma iTouch ID, yize kunjalo kungenzeka isivele ihlola uhlelo kwezinye izinhlobo ze-iPhone 13. Kubukeka kungeke kwenzeke ukuthi le iPhone entsha ifake lesi sici, nokuthi kuzofanele silinde okungenani unyaka, uma ekugcineni sifakiwe.
Kuzoba ngesinye sezigaba ezizoletha izindaba eziningi, ngokuthuthuka kulo lonke uhla, yize kubaluleke kakhulu ku-13 Pro naku-Pro Max. Lezi zinhlobo zizofaka i-lens entsha engu-6 element lens wide wide lens, uma kuqhathaniswa nezinto ezi-5 zezamanje. Lokhu kuzoba nomthelela ekuthuthukisweni kwekhwalithi yezithombe ezitholwe ngale lens, ezizosizwa futhi ukufakwa kwe-autofocus, manje engekho, kanye nokuvuleka okukhulu kwe-f / 1.8 (okwamanje kuyi-f / 2.4).
I-Los Okuqondiwe kuzoba kukhulu, yingakho ukwanda kosayizi wemodyuli yamakhamera. Lokhu kuzovumela ukungena okukhulu kokukhanya ukuthola ikhwalithi engcono ezithombeni ezithwebula ngokukhanya okuncane. Ngaphezu kwalokho, ubukhulu benzwa nabo buzoba bukhulu, bufake nokukhanya okuningi. Konke kubonakala kukhombisa ukuthi i-Apple ifuna kulo nyaka ukuthi ithuthukise izithombe ezithwetshulwe ngaphansi kwezimo zokukhanya okuphansi.
Le ntuthuko yakamuva ayicacisi kithi ukuthi izobakhona yini kuwo wonke amamodeli we-iPhone, noma uma izogcinelwa amamodeli we-Pro kuphela. ukuthuthukiswa kokuqiniswa kwesithombe, ukufakwa enzwa, ishiya ukuzinza okubonakalayo, ukuthola izithombe namavidiyo angcono. Okubonakala cishe kuqinisekile yilokho Inzwa ye-LiDAR izosebenza kuphela kwi-iPhone 13 Pro.
Kuzoba nezindlela ezimbili ezintsha zekhamera, eyodwa iyisithombe, ukuthatha izifinyezo zesibhakabhaka ebusuku. Lokhu kungachaza ukuthuthuka okuningi kugxile ezithombeni ezinokukhanya okuphansi nobubanzi. Enye imodi entsha kuzoba yividiyo, ngomphumela wokufiphaza ofana nemodi yesithombe yokuthwebula, ongaphinda uphinde uyibambe ngemuva kokwenza ngokwezifiso ukujula kwenkambu.
I-iPhone 13 entsha ingaqala ubuchwepheshe obusha obubizwa nge- "soft board battery", okukuvumela ukuthi wakhe amabhethri anezendlalelo ezimbalwa, ezisindisa isikhala sangaphakathi ku-iPhone. Ngale ndlela, umthamo webhethri ungakhuphuka ngaphandle kokukhulisa usayizi we-iPhone. I-iPhone 13 Pro Max kungaba yiyo ezothola ukwanda okukhulu kakhulu kwebhethri, ifinyelele ku-4,352mAh, kanti ezinye izinhlobo zingabona ukwanda okuncane.
Akubonakali ukuthi kuzoba nezinguquko ezinhlelweni zokushaja, zombili izintambo nezingenantambo. I-Apple yethule uhlelo lweMagSafe nge-iPhone 12, efinyelela ku-15W wamandla, kanti ngekhebula umthwalo omkhulu ngu-20W. Ngaphandle kokumangala, le datha izohlala ingashintshiwe ku-iPhone 13 entsha. Futhi akulindelekile ukuthi babe nenkokhiso ehlehliswayo, noma okungenani hhayi ukukhokhiswa okuphindayo okubavumela ukuthi basetshenziswe njengesisekelo esivamile sokushaja i-Qi. Sesivele sazi ukuthi i-iPhone 12 inokushaja okuphindayo kepha kukhawulelwe ekugcwaliseni kabusha ibhethri elisha leMagSafe elisanda kwethulwa yi-Apple.
Kucatshangwa ukuthi i-iPhone 13 entsha izofaka phakathi iprosesa ye-A15 Bionic, eyolandela i-A14 Bionic manje efakwe kwi-iPhone 12. Lesi sizukulwane esisha singafaka "uhlelo olusha kwi-chip" (i-SoC) olungeke luthuthukise kuphela ukusebenza kwedivayisi, ukudubula amandla ayo njengoba kwenzeka isizukulwane ngesizukulwane, kepha futhi kukhulisa ukusebenza kwayo ngokunciphisa ukusetshenziswa kwamandla.
Isitoreji sizohlala singashintshi, siqala ku-64GB y nge-512GB ephezulu. Kube namahlebezi ngokwandisa usayizi webhuthi ufinyelela ku-128GB, obekungaba yizindaba ezinhle nokungaphezulu kokunengqondo, kepha akubonakali ngathi kungenzeka kakhulu. Ithuba lokuthi i-iPhone 13 ingakhuphukela ku-1TB yokugcina kumamodeli we-Pro nayo ibonakala ikude kakhulu.
Zonke izinhlobo ze-iPhone 13 izoba nokuxhumeka kwe-5G, futhi izosebenzisa imodemu yeQualcomm X60. Ukuqaliswa kwalolu hlobo lwenethiwekhi kusesezingeni eliphansi emazweni amaningi, yize kulindeleke ukuthi u-2022 ekugcineni asho ukuqala kokunwetshwa kwawo jikelele. Mayelana nokuxhumeka kwe-WiFi, izohambisana namanethiwekhi amasha we-WiFi 6E, engeza ibhendi ye-6GHz futhi ithuthukise i-WiFi 6, isisesigabeni sokuqala kakhulu sokuqalisa.
Izobiza malini i-iPhone 13?
Alukho ushintsho lwentengo olulindelekile, ngakho-ke I-iPhone 13 isazobiza ngokufana ncamashi ukwedlula isizukulwane samanje.
I-iPhone 13 mini isuka ku- € 809
I-iPhone 13 isuka ku- € 909
I-iPhone 13 Pro isuka ku- € 1159
I-iPhone 13 Pro Max isuka ku- € 1259
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 13 » I-iPhone 13: ukwethulwa, intengo nakho konke ukucaciswa kwayo
Woza, uma une-iPhone 12, i-13 ayifanele, cishe iselula efanayo
Njengonyaka ngamunye, akukho okuguqukayo kusuka ku-11 kuye ku-12, babeka uzibuthe ngemuva
Yebo, uma futhi uno-11 no-10 kuyefana, abasavuseleli lutho.
Yebo, i-iPhone 13 ayikufanele ukuthenga. Lokho kuzokwandisa ibhethri liye ku- + 4300 mAh. I-iPhone Fold ne-iPhone 14 kuzoba ngokunye. Ngaphezu kwalokho, izinkampani ezinkulu manje seziqala ukusebenzisa ama-4n chips, ngo-2023 sizoba nama-gauge chips amathathu, lokho kuyathakazelisa!
Amabhethri azosebenzisa i-graphite ngicabanga ukuthi bathi? Amabhethri azohlala cishe isonto.
IJetpack Joyride + manje isiyatholakala ku-Apple Arcade eqinisekisa ukuthi i-Apple iphelelwe yimibono